Tsvaga yakanakisa tsika dzeIreland | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | tsika nemagariro, General, Ireland
Ireland, inozivikanwa seRepublic of Ireland inomiririra tsika yakatarwa uye tsika. Guta rayo riri muDublin, asi kune mamwe maguta akakosha seCork, Limerick kana Galway. Mune ino kesi isu tichataura nezvetsika dzeIreland, sezvo iri nyika inokwezva kutarisisa kune vamwe vacho, senge Zuva raSt.Patrick.
Apo patinotaura nezvazvo Ireland tinotaura nezvechitsuwa chinodada netsika nemagariro acho. Kunyangwe mazana emakore apfuura zvese zvaive zvakabatana kuUnited Kingdom, parizvino chikamu chekuchamhembe chete ndechavo, izvo zvakatungamirawo kumakakatanwa mazhinji. Asi kupfuura nhoroondo yayo pane zvinhu zvakawanda zvinoratidza ino nyika.
1 Zuva raSatrick Patrick
2 Vane Leprechauns
3 Michato yechinyakare muIreland
4 Kuridza, mutambo weIrish
5 Mumhanzi weIreland nekutamba
7 Pubs uye Guinness
Iwe haugone kutaura nezveIreland usingatauri nezveZuva raSt.Patrick, iro rinopembererwa kutenderera pasirese nhasi. Zuva rino rine mavambo aro mu Zororo rechiKristu uye chinangwa chekukudza Musande Patrick, mutariri weIreland. Inopembererwa munaKurume 17 uye zvese zvakashongedzwa neyakajairika yakasimba green iyo inosangana nezuva rino. Izororo renyika muRepublic yeIreland, saka izuva rakanaka rekunakidzwa nemhemberero kana tiri pachitsuwa. Imwe yemapareti anozivikanwa anoitika muguta guru, Dublin, uye mhemberero dzinowanzo gara mazuva akati wandei. Kwese kwese tichaona shamrock iyo inomiririra dzidziso yeUtatu Hutsvene yakaunzwa naSanta Patrick kuIreland uye kuti nhasi yakabatana nemufananidzo weIreland.
Kune rimwe divi, zvinokwanisika kuona vanhu vakapfekedzwa vakapfeka zvipfeko zvakasvibira uye se leprechauns pamabiko aSatrick Patrick, nekuti zvese zvakabatana netsika dzeIrish. Izvi leprechauns ndiwo maprechauns ndeaya eIrish mythology uye kuti vanogara vakapfeka sutu yakasvibirira uye neheti yemhando. Aya mavara chikamu cheimwe ngano dzakakurumbira idzo dzakatandadza mazera uye zvinonzi ivo vanovanza goridhe, nekudaro ivo dzimwe nguva vanozivikanwa nehari yegoridhe.
Michato yechinyakare muIreland
Munyika ino zvakare kune tsika dzakatenderedza mhemberero yemuchato. Muchato weIrish une mamwe matanho ari echinyakare uye ari kure nemichato yatajaira. Kusunga pfundo itsika yakanaka kwazvo umo vaviri vacho vakaisa maoko pamwe chete vachidzokorora mazwi mavanopika kuva pamwe chete. Panguva imwecheteyo, chero anotungamira mhemberero anosunga maoko avo neribhoni rine mavara rinozomiririra kubatana ikoko. Paivewo netsika yekupfeka bhiza bhiza raive nerombo rakanaka asi mazuva ano rakambo shandurwa kuita mucherechedzo wehosi yebhiza yaipfekwa nemuroora. Zvinonzi zvakare pazuva remuchato hanzi ichabikwa mumba memwenga uye kuti vachati vanofanira kudya munyu neoatmeal pakutanga kwemabiko kuita rombo rakanaka.
Kuridza, mutambo weIrish
Este mutambo ndeweCelt mavambo uye zvinogona kunge zvisinganzwiki kujairika kwatiri munyika medu, asi imomo zvakakosha. Inotambwa nebhora netsvimbo kana tsvimbo yakafanana neHockey asi yakafara. Unogona kumhanya uchitakura bhora pasi, uchitsigirwa netsvimbo kana muruoko rwako, asi mune yekupedzisira kesi iwe unogona chete kutora nhanho nhatu nayo. Mumwe mutambo muIreland uyo une vateveri vazhinji uye nhabvu ndeyeGaelic nhabvu, mhando yemutambo pakati penhabvu yatinoziva uye rugby.
Mumhanzi weIreland nekutamba
Haugone kuenda ku Ireland isina kunakidzwa nenziyo dzayo uye mimhanzi. Iyi mimhanzi yechinyakare inozivikanwa munzvimbo zhinji seCeltic dhizaini mimhanzi. Kune manzwi mazhinji uye nziyo dzakachengetedzwa mukati memazana emakore. MuIreland isu tinofanirwa zvakare kutsvaga mamwe maIrish ekutamba anoratidza nematambiro echinyakare.
Bloomsday haisi imwe yetsika idzo dzine chekuita nemaCelt uye anodzokera kumashure mazana emakore apfuura asi iriko uye iri kuramba ichiwedzera kukosha. Iyo 16 Chikumi ndipo panochengetwa zororo iri, kubva 1954, mune iyo rukudzo runobhadharwa kune hunhu hwenoverengeka Ulysses naJames Joyce. Imwe yetsika ndeye kudya zvakafanana ne protagonist musi iwoyo. Asi iye akatarisa zvakare mukutevera tsoka dzaDublin. Kune misangano yakati wandei muguta revanhu vanopfekawo zvechiitiko ichi.
Pubs uye Guinness
Pane chimwe chinhu chingave chizere tsika munzira yeIrish yehupenyu. Kana iwe ukashanyira Dublin haugone kupotsa iyo Tembere Bhawa, kwaunogona kunakidzwa neyakajairika maIrish pubs, nzvimbo dzekunakidzwa nemumhanzi, hurukuro uyezve yakanaka Guinness, iro doro par kugona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Tsika dzeIrish